Ny satroka fanao am-behivavy mivaro-kiraro - hoditra, akanjo, akanjo, hoditra, lamban'akondro, amboadia
Ny kapaotin'ny vehivavy miaraka amin'ny sofina - inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny andro mangatsiaka, ny safidy dia mofomamy tsara sy mahasoa. Ankoatra ny akanjo ivelany sy kiraro, dia zava-dehibe ny misintona ny loha. Amin'io tranga io, ny headgear dia tokony hifanaraka amin'ny fironana amin'ny lamaody, satria io ampahany amin'ny sary io dia eo foana. Iray amin'ireo vahaolana malaza sy maoderina indrindra amin'izao fotoana izao ny kapaotin'ny vehivavy miaraka amin'ny sofina.
Afo hoditra amin'ny sofina
Ny tombony tsy misy fepetra amin'ireny modely ireny dia ny fiarovana tanteraka ny lafiny rehetra amin'ny loha. Ny vokatra fanao dia tena azo ampiharina amin'ny andro mafana. Ireo headdresses toy izany dia tsy ho hafana anao amin'ny toetry ny andro mangatsiaka indrindra, fa manampy koa ny sarin'ny fahamoram-peo, haitraitra, fanatsarana. Ny lamaody amin'ny lamaody farany dia naseho tamin'ny lelam-pofona sy mamiratra - avy amin'ny amboadia, ny hoditra, ny lynx ary ny hafa. Ny mpanamboatra dia manolotra vokatra vita amin'ny hoditra na mampiasa menaka toy ny fivalanana. Andeha hojerentsika hoe karazana satroka volom-behivavy no lafo vidy indrindra:
Vokatra vokatra . Amin'ny lamaody, tsy ny vokatra voajanahary fotsiny, fa amin'ny kitaposim-borona ihany koa. Ny teknolojia maoderina dia mamela amin'ny alalan'ny fikarakarana manokana mba hamelomana ny felany ho toy ny voa-janaka araka izay tratra. Saingy ny modely toy izany dia tsy hanelingelina ny tetibola.
Fetsy kiraro . Ny endriny voalohany sy marevaka dia mijery avy amin'ny pataloha. Ny sofina amin'ny fehezam-boninkazo amin'ny vehivavy dia manana lamina maromaro mitovitovy, izay miforona noho ny kofehy mahazatra mandritry ny mitongilana ary mahaliana tokoa.
Colore colore . Ampiasao amin'ny sarinao ny mari-pamantarana iray mifangaro miaraka amin'ny fomba maivana. Ny vahaolana maoderina amin'ny lamaody maoderina dia volompokolon'ny volom-boasary feno loko sy asidra.
Iray amin'ireo lamaody sy malaza indrindra ny modely misy felana matevina sy lava be. Ny hatsaran-tarehin'ireny vokatra ireny dia mifototra amin'ny fanangonana voajanahary mahavariana eo amin'ny vala, izay misy fiovàna miala avy eo amin'ny fotony matroka mankany amin'ny tara-pahazavana. Ny felam-baton'ny vehivavy dia mety manana loko matevina lalindalina kokoa. Ny modely toy izany dia hisarika ny saina sy hameno ny sary amin'ny romanticism sy ny vehivavy. Noho ny habetsaky ny antontan-doko dia matetika ny felam-borona no mamolavola akanjo vita amin'ny hoditra na akanjo.
Ny vokatra vita amin'ny volon'ondry dia voamariky ny toetra tsara sy ny fiarovana ary ny faharetany. Modely hatsikana vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra. Noho izany, ny headgear dia singa iray, tsy misy fanatonana. Na izany aza, ny volon'ondry dia miompana tanteraka ary misy fiantraikany amin'ny hafanana. Mandritra izany fotoana izany, ny vovoka dia mivoaka tsara, ary manafina ny hoditra. Ny kapaotin'ny vehivavy iray miaraka amin'ny satroka misy hoditra misy volon'ondry iray dia mety sy tsara. Araka ny fantatra, ny volon'ondry dia manadio tena. Ny klasika dia ny fananganana ny loko miloko volomparasy, izay mifanaraka tanteraka amin'ny vahaolana amin'ny sary.
Mena ny hatsiaka amin'ny sofina
Ny zavatra tsara tarehy sy lafo indrindra dia miala amin'ny refy miavaka. Ity kiraro malefaka sy malefaka ity dia manana hatsarana mahafinaritra. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny milina anefa dia palette lava be. Ny headdresses matevina dia naseho tamin'ny loko marevaka maivana, mainty mainty, marevaka manga. Fa ny vehivavy sy ny tsara tarehy indrindra dia vehivavy fotsy fotsy miaraka amin'ny satroka hoditra vita amin'ny mink. Amin'ny fanomezana ny safidy amin'ny akanjo toy izany, dia azonao antoka fa efa nahazoana saram-panatanjahan-tena nahomby sy azo antoka ianao nandritra ny fizaran-taona maromaro tamin'ny socks matevina sy matetika.
Zana-tsavoka fary vehivavy
Ny lazan'ny hatsembohana mampifaly dia voafaritra amin'ny fahaizany. Modely tsara toy izany eo amin'ny handrina, sofina, temechko. Tsy azonao atao ny manahy ny mety ho fisian'ny hormonina sy mangatsiaka, satria ny akanjo maotina dia hiaro anao tanteraka amin'ny mety hitrangan'ny loza na dia amin'ny mangatsiaka mangatsiaka aza. Ny mpahaikanto dia manoro ity fomba ity ho an'ny kiraro isan-tanàna, fa koa amin'ny fanatanjahan-tena, ny asa aman-draharaha any ivelany, ary ny fizahan-tany. Ary mba ho tsara tarehy sy mendri-piderana foana amin'ny safidinao, mandinika ireto fironana manaraka ireto:
Tapaingotra vita amin'ny satroka hoditra sy hoditra . Tena tsara tarehy sy mahazendana ny vokatra mitafy hoditra. Mety ho kiraradra mirefotra izy io na mofomamy amin'ny sofina. Lasa malaza ny modely misy ny modelin'i Jacquard.
Toby fehiloha miaraka amin'ny tadin-tsoavaly misy poizina . Ny mahasarika sy ny vokatra dia hampiana baolina mavomavo. Ny pomôpôma koa dia azo anaovana sifotra. Ny mpahaikanto dia manamboatra ny sofina, ny satroboninahitra na ny tendrony.
Sports style . Modely efa voaomana ho an'ny fanatanjahantena ririnina. Ny lohan-doha toy izany dia miavaka amin'ny tendron-drano tsy misy fotony vita amin'ny plashevka na bolologia. Ao amin'ny fanangonana fanatanjahan-tena dia misy koa akanjo volom-bolo izay mitondra anjara amin'ny fiantraikan'ny thermoregulatory.
Tapa-kofehy vita amin'ny sofina
Ny vokatra vita amin'ny kofehy dia aseho tsy amin'ny ririnina, fa koa amin'ny famokarana demi-sezon. Ny fahasamihafana dia ny fananganana ny kofehy. Ny fankalazana ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana dia ny akanjo vita amin'ny voajanahary voajanahary na ny dikan-teny mifamadika - volon'ondry, kodiarana-acrylic. Ho an'ny ririnina mandritra ny ririnina - alpaca, mohair, angora, volon'ondry na acrylic dia mety kokoa. Ny akanjon'ny vehivavy mitafy hoditra dia marevaka amin'ny modelim-borona - kofehy, arans, knobs na sary miloko manga. Eo amin'ny sehatra, Accessories avy amin'ny filomanosana melange sy ny endriky ny jacquard.
Ny hoditra hoditra amin'ny sofina
Vahaolana tena tsara izay ho lasa maneran-tany amin'ny sary amin'ny endriny rehetra dia ny safidin'ny vokatra hoditra. Mba hahazoana fampiononana lehibe dia ilaina ny mipetraka amin'ny fitaovana voajanahary. Na izany aza, eo amin'ny tsena maoderina, misy ihany koa ny modely kalitao avy amin'ny hoditra sy ny hoditra eco-hoditra. Ny hatsikana amin'ny ririnin-tsiranoka amin'ny sofina sofina dia nofenoina volon'ondry miloko volom-borona, baise na felana. Ny hatsikana toy izany koa dia aseho amin'ny haingon-trano malaza - modely modely ho an'ny biby mandady, miaraka amin'ny tendron-pifaneraserana, lacquered coating.
Ny tsotra sy mora indrindra amin'ny vidiny dia vokatra vita amin'ny kiraro. Ny modely toy izany dia aseho amin'ny famokarana ny orinasa sy ny fametrahana akanjo vita amin'ny tanana vita tanana. Mba hampidirana ny bika aman'endriky, ny stylists dia omena alalana hanome loko mamirapiratra sy manintona. Eo am-pandrosoana, ny satroka mena vehivavy iray miaraka amin'ny sofina mivelatra, geometrika sy loko manga, avana amin'ny avana sy ny vahaolana hafa. Ny vokatra sy ny fahatsiarovan-tena ao anatin'ilay tetikasa dia hanampy ny teboka rehetra sy ny fanilony. Ny kofehy vita amin'ny kofehy dia mety tsara amin'ny vanim-potoana ny demi, fa ao amin'ny famolahana hafanana sy ny ririnina.
Amin'ny inona ny manao satroka amin'ny sofina sofina?
Ny maha-zava-dehibe ny satroka kanto dia tokony ho amin'ny lafiny tsotra sy stylistic, fa ny fahafaha-manao amin'ny safidy amin'ny akanjo sy kiraro. Ny fametrahana ny tanjona fototra amin'ny tsipìka dia zava-dehibe ny mikarakara ny fanatanterahany. Andeha hojerentsika hoe inona no hevitra tena malaza androany:
With uggs . Raha tsy fantatrao izay tokony hatao amin'ny satroka hoditra amin'ny sofina sofina, ny vahaolana handresena dia hahazo aina ny hatsaran'ny Australian , na amin'ny endrika avo sy ambany. Ny safidy hafa dia mety ho boots na kiraro miaraka amina bootbreak lehibe eo amin'ny làlana fisaka.
Miaraka amin'ny kiraro amin'ny kiraro . Raha vita amin'ny endrika laconic ny headdress, ampio ny endriny amin'ny endriky ny vehivavy. Na izany aza, amin'ity tranga ity, ny kiraro dia miorina lavaka lava be sy lavaka - bararata, kibay, endrika manify.
Amin'ny fanatanterahana ny fomba fanatanjahantena . Ny akanjo vita amin'ny kiraro, kiraro, kiraro ary hoditra dia mameno tsara tanteraka ny sarin'ny kazhual. Ho an'ity tongolobe iray ity dia mendrika ny mijanona amin'ny kiraro fanatanjahantena - kiraro, kiraro, kofehy mafana, kiraro baomba .
Hatena amin'ny satroka hoditra sy akanjo manga
Ny voalohany sy tsy mahazatra dia ny fametrahana headdress amin'ny fomba rosiana miaraka amin'ny fitafiana ivelany tsara tarehy vita amin'ny volon'ondry. Na dia izany aza, ny antokon'olona toy izany dia tsy voafaritra amin'ny fomba maoderina. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny mifidy kitapo akanjo sy pataloha avy amin'ny volony iray na farafaharatsiny amin'ny loko mitovy. Na izany aza, io lalàna io dia tsy heverina ho tsy maintsy atao. Ny safidy mandresy amin'ny fandresena dia ho volo fotsy hoditra iray izay hameno ny akanjo ivelany amin'ny vata. Noho ny fomban'ny satroka, aza akanjo lava fohy farafahakeliny. Hahomby ny fisafidianana lamban-jiro madinika na midi.
Hatena amin'ny satroka hoditra misy akanjo
Ny "Ensemble" honohono "Accessories" sy stratejika mafy dia mifanaraka amin'ny vahaolana vahaolana amin'ny fikorotanana ny torolàlana amin'ny tsipika iray. Ny volon-doha volon-davenona dia tsara kokoa ny mifidy karazana laconic sy marina. Ny safidy tsara dia ny silhouette mahazatra tsotra. Ny ririnina ho an'ny vehivavy amin'ny ravin-tsofina vita amin'ny kofehy na ny kiraro dia hameno tsara ny akanjo fohy, ny fomban-damba manakaiky ny fomba, ny fomba fanao. Ny halavan'ny fitafiana ivelany, toy ny amin'ny akanjo volom-paty, dia tsy tokony ho lehibe indrindra. Ny mahomby indrindra dia ny fotokarena malefaka izay manidy ny lohalika.
Hatena amin'ny sofina amin'ny jirom-bolo
Ny safidy manerantany ho an'ny headdress vehivavy amin'ny fomba rosiana dia fehiloha fohy. Amin'io tranga io, ny fananganana ny fitaovana sy ny jaky dia mety mitovy na mifanohitra. Amin'ny vanim-potoanan'ny demi, ny choix maingoka dia hoditra hoditra coho . Ny endrika amam-bika dia azo ampitomboina amin'ny karazana volom-boninkazo sy mofomamy, indrindra fa raha misy ny ampembe dia misy kapa-earlaps ho an'ny vehivavy. Ny modelim-bolo vita amin'ny hoditra sy ny vita amin'ny lamban'akanjo dia nampifanaraka tsara ny akanjo vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra. Ny akanjo volon'osy volo dia mifanaraka tanteraka amin'ny valan-javaboahary sy ny fomba amin'ny fomba miaramila.
Fanatanjahantena ara-pihetseham-po amin'ny metatra ambaratonga ary ny pedometer
Vehivavy fanatanjahan-tena vehivavy
Hatona amin'ny kisendrasendra - amin'ny inona no tokony hitafy sy ny fomba hamoronana sary kanto?
Accessories ho an'ny palitao manga
Mitandrema amin'ny rojo
Pendor brouel ny mpivaro-tena
Goulash avy amin'ny kobam-borona - hevitra mahaliana amin'ny fanaovana sakafo tsotra amin'ny siny
Morphologie of spermatozoa
Voangom-bokatra - voka-bary kalorie
Visa ho an'i Hongria irery
George Clooney, Salma Hayek ary Richard Gere dia nahazo mari-pankasitrahana tao amin'ny Vatican
Ny pizza tsara indrindra
Perfume nataon'i Jean Marco Venturi
Hafakely mamy avy amin'ny yeast ao amin'ny oven
Fanorenana fanorenana malemy
Emma Watson dia nanandrana ny tenany ho tonian-dahatsoratry Vogue ary nibanjina sary fotsy mainty sy fotsy
Ho an'ny zaza 10 volana
Niverina tao amin'ny tambajotra sosialy i Kim Kardashian, saingy mbola tsy vonona ny hivoaka
Ny tuberculosis - ny soritr'aretina, ny marika voalohany amin'ny endrika rehetra sy ny karazana aretina mikotrika
Ahoana ny fialana amin'ny rivotra?